‘लम्फू’ युनिट राजधानी फर्कियो, के होला व्यापार ? « Ramailo छ
‘लम्फू’ युनिट राजधानी फर्कियो, के होला व्यापार ?
समय : 6:21 pm
यही शुक्रबार, बैशाख २८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘लम्फू’ युनिट केहि दिनको मोफसल यात्रा पछि राजधानी फर्किएको छ । निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछाने सहित कलाकारहरु कबिर खड्का, सञ्जीत भण्डारी, आयान खड्का, निर्माता शक्ति बल्दभ घोरासैनी लगायतको टीम धरान, दमक, हेटौँडा, चितवन र पोखरा पुगेर राजधानी फर्किएको हो ।
लम्फू युनिटले यी हरेक शहरमा प्रेसमिट गरेको थियो ।
पत्रकार भेटघाटमा तरकारीवालीको नामले चर्चामा आएकी कुशुम श्रेष्ठप्रति जिज्ञासा आएको थियो । फिल्ममा तरकारीवालीको भूमिका बारे निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछाने भने, ‘उनलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेका छैनौं ।’ यस्तै निर्देशक लामिछानेले तरकारीवालीको चर्चालाई मात्रै फिल्ममा क्यास गर्न नखोजिएको बताए । ‘मेरो फिल्म अमलाको स्वादजस्तो छ, शुरुमा टर्रो खाँदै जाँदा स्वादिलो’, निर्देशक लामिछानेले फिल्म बारे भने, मौलिक फिल्म बनाएको छु । राम्रो लागे अँगाली दिनुस्, नराम्रो लागे गाली गरिदिनुस् ।’
यता नव नायक कबिर खड्काले आफ्नो लागि ‘लम्फू’ भाग्य निर्धारक भएको बताए । उनले अहिले आफ्नो परिचय नै लम्फू बनेको बताए । ‘अहिले मलाई सबैले लम्फू भनेर बोलाउँछन् । फिल्मको पात्र नै मेरो परिचय बन्दा खुशी लागेको छ ।’, कबिरले उनले अभिनय बाहेक आफुले अरु केही नसोचेको पनि बताए । कलाकारद्वाय सञ्जीत भण्डारी र आयान खड्काले ‘लम्फू’ मौलिक नेपाली फिल्म रहेको बताए ।
निर्माता शक्तिबल्दभ घोरासैनीले काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर फिल्मको ठुलो बजार रहेकोले प्रचार प्रसारको लागी मोफसल पुगेको जानकारी दिए । फिल्म सफल बने आफुहरु पुनः राजधानी बाहिर दर्शकसामु जाने समेत उनले बताए । ‘यो फिल्म बहुप्रतिक्षित नहुन सक्छ तर राम्रो सम्भावना भने पक्कै बोकेको छ’, निर्माता घोरासैनीले भने ।